Wasaarada Gaashaandhiga oo shaacisay Saraakiil Shabaab ah in Sh/hoose lagu dilay – STAR FM SOMALIA
Wasaarada Gaashaandhiga Dowladda Federalka Somaliya ayaa shaaca ka qaaday in Gobolka Shabellaha hoose lagu dilay Saraakiil ka tirsan Ururka Al Shabaab, kadib dagaal dhexmaray ciidamada Xooga dalka Somaliya iyo kuwa Shabaab.
Dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay duleedka Deegaanka No.50, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Xooga dalka ee ku sugan Deegaankaasi.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Gaashaandhiga Xukuumadda Somaliya Cabdalla Xuseen Cali, ayaa sheegay dagaalka halkaasi ka dhacay in lagu dilay Saraakiil badan oo Shabaab ah.
Waxa uu sheegay 14 Saraakiil iyo Ciidamo oo ka tirsanaa Ururka Al Shabaab ciidamada Xooga dalka Somaliya inay ku toogteen dagaalkaasi, kuwaasi oo meydkooda meesha laga qaaday.
Cabdalla Xuseen Cali, Wasiir ku xigeenka Difaaca Somaliya ayaa sheegay ciidamada Xooga dalka Somaliya inay soo furteen hubkii ay wateen dagaalyahanada ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Dagaalkaan ka dhacay Deegaanka No.50, ayaa yimid kadib markii Ururka Al Shabaab ay isku dayeen inay weeraraan goob Koontarool ah oo ciidamada ay ku leeyihiin deegaankaasi, balse ciidanka ay heleen macluumaadka ku aadan dagaalka Shabaab qorsheynayaan sidaasina ay ugu diyaargaroobeen.
Ciidamada Xooga dalka ee ku sugan Deegaanka No.50 oo hab beeleed u abaabulan ayaa hub fara badan ka hela ciidanka Amisom ee Saldhiga ku leh deegaanka No.50.
Ma jirto dhanka Ururka Al Shabaab wax war ah oo ka soo baxay oo ay kaga hadlayaan sheegashada Wasaarada Gaashaandhiga ee ku aadan in la dilay Saraakiil iyo ciidamo Shabaab ka tirsan.